Igwe mmanụ dizel, generator gas, Yanmar Series - New Hongfu
Usoro usoro Hongfu AJ-C na-akwado injin Cummins. Usoro ihe omume Hongfu AJ-C bụ nke ntụkwasị obi dị elu
Usoro usoro Hongfu AJ-DE na-akwado injin Deutz. Emission ọkọlọtọ-EU II, EUIII ma ọkọlọtọ usoro maka dị iche iche ahịa.
Hongfu AJ-Y usoro na-akwado engineer Yanmar nke ebubataro na Japan site na mbụ
Usoro Hongfu AJ-KB nakweere Kubota engine nke sitere na Japan.
Anyi ruru eru &
nke ahụmihe a
Ike Hongfu gbara mbọ ịghọ onye ọkachamara n'ụwa nile n'ịnye ike site na iji teknụzụ ndị dị ịtụnanya, atụmatụ dị mma, ọrụ zuru ụwa ọnụ na ndị na-ekesa ihe dị iche iche na kọntinent 5 na 35, na-ejikọ aka na mmelite nke ike ọkọnọ zuru ụwa ọnụ. jenerato, eke gas generator, ihe eletriki ya na ihe ndi ozo. A na-eji ha niile eme ihe na ngwa nke ike ọdụ, ụlọ, ụlọ mmepụta ihe, ụlọ ọgwụ na ụlọ ọrụ na-egwuputa ihe wdg.
Ngwa ere ere
Lelee Ngwaahịa anyị
Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị ma ọ bụ ndị akwụ ụgwọ, biko hapụ anyị
Waygbọ okporo ígwè
Akụkọ kacha ọhụrụ anyị
Kedu nyocha ọzọ ndị ahịa kwesịrị ịtụ anya ịhụ site na Cummins Turbo Teknụzụ?
Investmentba n'ihu na itinye ego na nyocha na mmepe maka teknụzụ mmanụ ụgbọ ala ahụ na-aga n'ihu ma na-egosi mkpebi nke Cummins iji nyefee ụlọ ọrụ na-eduga azịza mmanụ gafee ahịa na-aga ma na-aga n'okporo ụzọ awara awara. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ndozi teknụzụ Holset, sonye na…
Kedu ahụmahụ Cummins nwere na ụdị nyocha a?
Cummins nwere ihe karịrị afọ 60 nke ahụmihe na-etolite ndị na-ebuso ndị ọbịa ụlọ Holset ma jiri ụlọ nnwale ụlọ na-eduzi ule siri ike na nyocha ugboro ugboro na ngwaahịa na teknụzụ ọhụrụ. “A na-eji usoro mgbanwe ọkụ ọkụ dị ọtụtụ eme ihe ọ Cụ (ụ (CFD) iji gosipụta ụdị mmanụ na akara s ...
Kedu nyocha ọzọ ndị ahịa kwesịrị ịtụ anya ịhụ site na Cummins Turbo Techn ...
Etinyekwu ego na nyocha na mmepe maka mmanụ dizel…
Cummins nwere ihe karịrị afọ 60 nke ahụmịhe na-emepe emepe Holset…
Ahịa Dizel Generator, Obere Generator, Ahịa Generator ji arụ ọrụ, Ego njikwa, 240kw Generator, Dizel Generator Na Kubota Injin,